It is me. Ko Niknayman.: ဓမ္မအတွင်း အဓမ္မတို့ ဗြောင်ကျကျ ၀င်ရောက်လာနေပြီ။
စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးအပြီးတွင် ပြည်သူလူထုအတွင်းသို့ နအဖ လက်ပါးစေများ၊ အလိုတော်ရိများသည် ပုံစံမျိုးစုံ၊ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံဖြင့် ပူးသတ်ဝင်ရောက်လာနေသည်မှာ ယခုအခါ ဓမ္မနယ်ပယ်အတွင်းသို့ပင်လျှင် အင်နှင့်အားနှင့် ၀င်ရောက်လာနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မစာပေသင်တန်းများအတွင်း ယခင်က ဓမ္မကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူ သူတော်စင်များသာ အများအပြားရှိနေခဲ့ပြီ ထောက်လှမ်းရေး အနည်းငယ်သာ ခိုးချောင်းခိုးဝှက်ဖြင့် ရှိနေခဲ့ကြရာမှ၊ ယခုအခါ သင်တန်းများအတွင်း ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင်၊ အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များကို ဗြောင်ကျကျ ၀င်ရောက်ရောနှောစေခြင်းကို နအဖမှ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်၍ လုပ်ဆောင်စေကြောင်း အထူးသတိပြုဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဓမ္မဗျူဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာ ဓမ္မစာပေသင်တန်းကျောင်းတွင် ယခုလ (၁၆-၂-၂၀၀၈) စနေနေ့မှ စ၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းများတွင် အများနည်းတူမဟုတ်ဘဲ၊ သီးခြားခုံတန်းများတွင် (ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များသာ) ဟု စာများကပ်၍ လူ (၆၀/၇၀) စာ နေရာများ သီးခြားစီစဉ်ပေးထားရ၍ ထို နအဖ လက်ပါးစေများ၊ အလိုတော်ရိများကို သင်တန်းချိန်တွင် လာထိုင်ခွင့်ပေးထားရပါသည်။ ထိုအထဲမှ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင်တစ်ဦး၏ မေးမြန်းပုံမှာ ဒါတွေကို သင်ပြီးရင် ဘာရမှာလဲ။ ဘာလုပ်လို့ ရမှာလဲ ဟူသတည်း။ ၎င်းပြောသော စကားကို ကြားရခြင်းဖြင့် ဓမ္မ၏ အနှစ်သဘော၊ ဓမ္မကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုထက် လုပ်နေကျ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဘာအခွင့်အရေး၊ ဘာအကျိုးအမြတ်ရမလဲဟု မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသော လေယူလေသိမ်းကို ကြည့်၍ မှတ်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော နအဖသည် ၎င်း၏ လက်ပါးစေများကို ဓမ္မနယ်မြေအတွင်းသို့ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စတင်ဝင်ရောက် စိမ့်ဝင်နေစေရတာလဲ ဆိုတာကို ပြည်သူအများ အထူးသတိထားရန် လိုအပ်လာပါသည်။
သာသနာကို ပံ့ပိုးရန်လော၊ စံနစ်တကျ ဖျက်ဆီးရန်လော။
Posted by Ko Niknayman at 3:59 PM